सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र | चितवन पोष्ट
गृह » सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र
पाठक पत्र • विचार
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उर्फ कमरेड प्रचण्डज्यू, नमस्कार ! यो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मैले हालका प्रधानमन्त्री दाहालज्यूलाई मात्र होइन, यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीज्यूहरु एवम् अब पालो पर्खेर बसिरहनुभएका भावी म्यादी प्रधानमन्त्रीज्यूहरुलाई पनि गरेको हुँ । प्रचण्डज्यू, तपाईं हाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले यो खुला पत्र पठाएको हुँ । म एक मध्यम वर्गीय हालसम्म कुनै पनि पार्टीको औपचारिक सदस्यता नभएको परिवारको सदस्य हुँ । स्नातकोत्तर सकेर अहिले डिपेन्डेन्ट भिसामा धर्मपत्नीसहित अधिकांश नेपालीहरुको सपनाको देश अस्ट्रेलियाको भिसा प्रक्रियामा छु । मेरो भिसा पनि लाग्ला, अनि म त्यहाँ गएर जेसुकै काम गरौँला । मेरो शिक्षाको त्यहाँ कुनै मूल्यांकन हुनेछैन । म त्यहाँ गएर भाँडा सफा गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि काम दिनको १२ देखि १६ घन्टासम्म गर्नेछु । म त्यहाँको सडकमा हिँड्दा कसैले मलाई होच्याएर ‘तँ नेपाली, वर्षमा २ वटा प्रधानमन्त्री फेरिने गरिब देशको गरिब मान्छे, हाम्रो देशमा पैसा कमाउन आएको होस्’ भन्दा म शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने छ । मलाई थाहा छ, म त्यहाँ आधुनिक सुखसुविधा त भोगचलन गरिरहेको हुन्छु, तर भित्री मनदेखि चाहिँ रोइरहेको हुन्छु । किनकि, म मित्रराष्ट्र भारतमा ७ वर्ष बसेर पढाइ सकेर आएको मान्छे । मैले त्यहाँ कलेजमा अनि बसाइँका क्रममा नेपाली हुनुको अनि नेपालीपनको मूल्य चुकाएको छु । नेपाली, गोर्खा, बहादुर, कान्छा, चौकीदार आदि इत्यादि नामले दिनहुँ पुकारिन्थ्यो कलेजभित्र अनि बाहिर । सायद्, राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेम भन्ने कुरा जब आफू आफ्नो देश छोडेर बाहिर गइन्छ, तब बल्ल थाहा हुन्छ ।
मैले आज पनि भन्ने गर्छु जोकोहीलाई, म विश्वको एक सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र जो आजसम्म कसैको गुलाम भएर बसेन, शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थान, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अनि विविध प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाल देशको नागरिक हुँ । मलाई आफ्नो देशको इतिहास, धर्म, संस्कृतिप्रति गर्व लाग्छ । मलाई अझै पनि विदेशको भौतिक सुखसुविधा र सुखसयलमा आफ्नो स्वाभिमान बेचेर कृत्रिम हाँसो हाँस्नु छैन । जुन काम म त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही काम म यहीँ बसेर गर्न सक्छु । मलाई वास्तवमा त्यो अस्ट्रेलियाको अत्याधुनिक सहरभन्दा आफ्नै देशको गाउँघर, पाखापखेरा राम्रो लाग्छ । जुन लगानी म गरेर जान लागिरहेको छु, त्यही लगानीमा म आफ्नै देशमा आफ्नै योग्यताअनुसार केही गर्न चाहन्छु । बाँझो रहेको हाम्रा पाखापखेराहरुलाई हराभरा एवम् उत्पादनमूलक बनाउन चाहन्छु । आफ्नै देशमा स्वाभिमानसहित काम गर्न रूचाउँछु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म यही देशमा अवसरको खोजीमा छु । तर हालको राजनीतिक अस्थिरता, पटकपटकको बन्द, हड्तालको राजनीतिबाट हामीले कहिले मुक्ति पाउने ? म आफ्नै देशमा आफ्नै आफन्त, दाइभाइहरुका बीचमा हाँसखेल गरी आफ्ना दस नङ्ग्रा खियाएर केही गर्न चाहन्छु । त्यसैले साविक, बहाल एवम् हुनेवाला प्रधानमन्त्रीज्यूहरुलाई म एउटै निवेदन गर्न चाहन्छु– मलाई आफ्नै देशमा केही गर्ने वातावरण मिलाइदिनु प¥यो । कुनै पनि मागका लागि बन्द, हड्ताल गर्ने परम्परा त्यागेर डा. गोविन्द केसीले जस्तो सत्याग्रहको आन्दोलन सुरूवात गर्नुप¥यो । देशमा अमनचयन, शान्ति सुरक्षा, सुशासन अनि स्थायित्व कायम होस् ।
अन्त्यमा म हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईं जुनसुकै वाद, पार्टी या सिद्धान्तका प्रधानमन्त्री किन नहुनु होस्, मजस्ता लाखौँ नेपालीलाई स्वाभिमान बेच्नबाट जोगाएर देश विकासमा अघि बढ्ने प्रेरणा दिनुहुने छ भन्ने आशा गर्दछु ।
धन थुपार्ने प्रेतात्मा
गुरूङ समुदायको नया“ वर्ष ल्होसार कि ल्होछार ?